တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း: မုန်းမာန် ကင်းဝေး မေတ္တာရေး
နေညိုညို ညနေချမ်းမှာ လျှောက်နေကြ ဂျလပစ္စလမ်းနှင့် မရဒါနလမ်းပေါ်မှာ လမ်းလျှောက်
ရင်း အတွေးတစ်ခု ဝင်လာပါတယ်။ လူတွေ ပြောနေကြတဲ့ " မေတ္တာဆိုတာ ဘာလဲ " ဆိုတာ
တစ်လမ်းလုံး စဉ်းစားပြီး ကျောင်းသို့ ပြန်ရောက်လာပါတယ်။ ကျောင်းရောက်တော့ မေတ္တာ
အကြောင်း ရေးသားရန် ဟန်ပြင်လိုက်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ ထိုင်နေကြ အခန်းထောင့်နားက ကွန်ပြူ
တာရှေ့ကို ဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ မေတ္တာနှင့် ပတ်သက်သည့် အချို့ အကြောင်းအရာ
လေးများကို ကျောင်းတိုက်ထဲက စာကြည့်တိုက်ထဲမှ စာအုပ်များ ပြန်လည်ကြည့်ပြီး အချက်
အလက်များကို ယူဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။ အရင်က မှတ်သားဖူးသည့် မှတ်ချက်များနှင့် လက်ရှိ
စုဆောင်းထားသော အချက်အလက်ကို ယူ၍ ဤဆောင်းပါးလေးကို စတင် ရေးသားလိုက်
လောကကြီးမှာ ကွဲပြားမှုတွေ များစွာရှိနေကြပါတယ်။ တချို့က မေတ္တာနှင့် တဏှာ မကွဲပြားနိုင်
အောင် ဖြစ်နေတာတွေ ရှိနေကြသဖြင့် မေတ္တာအကြောင်း သိဖို့ရန် လိုအပ်လာပါတယ်။
ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ တဏှာဆိုတာ မေတ္တာ အယောင်ဆောင်ပြီး အလည်လာတဲ့ ဧည့်
သည်ပါ။ တဏှာအကြောင်း ကောင်းကောင်း မသိကြသဖြင့် မေတ္တာဆိုတာ မသိကြတာလည်း များစွာရှိပါတယ်။
ပါဠိတော်မှာ တဏှာနှင့် မေတ္တာကို သဏ္ဍာန်ပြယုဂ် ထုတ်ပြထားပါတယ်။ အဲဒါက ဘာလဲဆိုရင်
မေတ္တာယနာ မုခေန ရာဂေါ ဝဉ္စေတိ တဲ့ တဏှာရာဂသည် မေတ္တာအသွင်ဆောင်ပြီး ဖျား
ယောင်တတ်၏ ဟု ဖော်ပြထားတာ နေတ္တိပကာရဏာဋ္ဌကထာမှာ တွေ့ရှိရပါတယ်။ ဒါကြောင့် မေတ္တာစစ် မေတ္တာမှန်ဆိုတာ အဖြေရှာဖို့ အမှန်တကယ် လိုအပ်လာသလို မေတ္တာ
ဆိုတာကို ဘာကြောင့် ခေါ်တာလဲဆိုတာ အဖြေမှန် သိဖို့ မရှိမဖြစ် လိုအပ်လာပါတယ်။ တချို့က တစ်ထောင့်ငါးရာ တဏှာနှင့် ရင်းနှီးထားတဲ့ ကိလေသာတွေကို မေတ္တာအဖြစ်
ပုံမှားရိုက်ပြီး မေတ္တာလို့ တင်စားကာ ခေါ်ဆိုကြတာလည်း ရှိကြပါတယ်။ ဒါဟာ မှားယွင်းမှု တစ်ခုသာ ဖြစ်တယ်။
ပြီးတော့ တစ်ထောင့်ငါးရာ ကိလေသာတွေနှင့် ရောနှောလျက် တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး သဘောတူ နားလည်မှု ယူပြီး သံယောဇဉ်တွေ ဖြစ်လာကြတဲ့ အရာဟာ မေတ္တာ မဟုတ်တဲ့ အချစ်သာ
မေတ္တာဆိုတာသည် ဗြဟ္မဝိဟာရတရား လေးပါးထဲက တစ်ပါး ပါဝင်ပါတယ်။ ထိုမေတ္တာသည် တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် ကိုယ်ကျန်းမာမှု၊ စိတ်ချမ်းသာမှုကို အလေ့
ထားပြီး အထူးဂရုစိုက်တာ မေတ္တာပင်ဖြစ်ပါတယ်။
သုတ္တန္တပိဋက၊ အင်္ဂုတ္တရ နိကာယ၊ ပဌမပဏ္ဏာသ၊ မေတ္တာဝဂ္ဂ၊ စာမျက်နှာ (၁)၊ မေတ္တာသုတ္တန် တွင် အောက်ပါအတိုင်း ပါဠိတော်များကို ဖော်ပြထားတာကို ရှာဖွေ တွေ့ရှိရပါတယ်။
မေတ္တာယ ဘိက္ခဝေ စေတောဝိမုတ္တိယာ အာသေဝိတာယ ဘာဝိတာယ ဗဟုလီကတာယ ယာနီကတာယ ဝတ္ထုကတာယ အနုဋ္ဌိတာယ ပရိစီတာယ သုသမာရဒ္ဓါယ အဋ္ဌာနိသံသာ ပဋိကင်္ခါ။
ကတမေ အဋ္ဌ? သုခံ သုပတိ၊ သုခံ ပဋိဗုဇ္ဈတိ၊ န ပါပကံ သုပိနံ ပဿတိ၊ မနုဿာနံ ပိယော
ဟောတိ၊ မနုဿာနံ ပိယော ဟောတိ၊ ဒေဝတာ ရက္ခ န္တိ၊ နာဿ အဂ္ဂိ ဝါ ဝိသံ ဝါ သတ္တံ ဝါ ကမတိ၊ ဥတ္တရိံ အပ္ပဋိဝိဇ္ဈန္တော ဗြဟ္မလောကူပဂေါ ဟောတိ။ မေတ္တာယ ဘိက္ခဝေ စေတော
ဝိမုတ္တိယာ အာသေဝိတာယ ဘာဝိတာယ ဗဟုလီကတာယ ယာနီကတာယ ဝတ္ထုကတာယ အနုဋ္ဌိတာယ ပရိစိတာယ သုသမာရဒ္ဓါယ ဣမေ အဋ္ဌာနိသံသာ ပါဋိကင်္ခါ တိ။
သုတ္တန္တပိဋက၊ အင်္ဂုတ္တရနိကာယ၊ ပဉ္စကနိပါတ၊ သံမယသုတ္တံ၊ စာမျက်နှာ-၅၈ တွင် အောက်ပါ ပါဠိတော်ကို တွေ့ရှိရပါတယ်။
ပုန စ ပရံ ဘိက္ခဝေ ဘယံ ဟောတိ အဋဝိသင်္ကောပေါ၊ စက္ကသမာ ရုဠာ ဇနပဒါ ပရိဟာယန္တိ၊ အယံ ဘိက္ခဝေ စတုတ္ထော အသမယော ပဓာနာယ။
(သုတ္တန္တပိဋက၊ အင်္ဂုတ္တရနိကာယ၊ ပဉ္စကနိပါတ၊ သံမယသုတ္တံ၊ စာမျက်နှာ-၅၈)
သုတ္တန္တပိဋက၊ အဂုင်္တ္တရနိကာယ၊ ပဉ္စကနိပါတ၊ သံမယသုတ္တံ၊ စာမျက်နှာ-၅၉ တွင်လည်း
မေတ္တာနှင့် ပတ်သက်ပြီး အောက်ပါ ပါဠိတော် တချို့ကို တွေ့ရှိရပြန်တယ်။
ပုနစပရံ ဘိက္ခဝေ မနုဿာ သမဂ္ဂါ သမ္မောဒမာနာ အဝိဝဒမာန ခီရောဒကီဘူတာ အညမညံ ပိယစက္ခူဟိ သမ္ပဿန္တာ ဝိဟရန္တိ။ အယံ ဘိက္ခဝေ စတုတ္ထော သမယော ပဓာနာယ။
(သုတ္တန္တပိဋက၊ အဂုင်္တ္တရနိကာယ၊ ပဉ္စကနိပါတ၊ သံမယသုတ္တံ၊ စာမျက်နှာ-၅၉)
မေတ္တာ ၂-ပါး။ ။
သတ္တ၀ါများအပေါ်၌ ချစ်ခင် ပွားတိုးစေသောတရား နှစ်ပါးကိုလည်း အောက်တွင်ဖော်ပြထားပါ
(၁) မေတ္တာစစ်- အဒေါသ ပုဗ္ဗင်္ဂမ မေတ္တာယ, သတ္တ၀ါများအပေါ်၌ ချစ်ခင်နာလို စွတ်စိုစေး
(၂) မေတ္တာတု- သားချစ် မယားချစ် မိဘချစ် ဆရာချစ် ဆွေမျိုးချစ်သည့် မခွဲနိုင်သော အချစ် များ၊ ဂေဟသိတပေမခေါ် အိမ်၌မှီသော အချစ်မေတ္တာတု, မေတ္တာယောင်မျိုး 'တဏှာပေမ' သာဖြစ်၏။
မေတ္တာ ၃-ပါး။ ။
ထို့အပြင် မူလပဏ္ဏာသ ပါဠိတော် ၂၆၇၊ အဋ္ဌကထာ ၊ ဒုတိယအုပ်၊ စာမျက်နှာ ၁၄၂ တွင် ချစ်ခင်စွာ ကူညီပွားစီးပေးမှု သုံးပါးကိုလည်း အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
(၁) ကာယကံ မေတ္တာ- သတ္တ၀ါ အပေါင်းတို့ ချမ်းသာကြောင်းအတွက် ကိုယ်အားဖြင့် ၀ိုင်းဝန်းစောင့်ရှောက် ကူညီပေးမှု၊ ကိုယ်ဖြင့် အရိုအသေပေးမှု၊
(၂) ၀စီကံ မေတ္တာ- ချစ်ခင်သော စိတ်ဓာတ်ဖြင့် နှုတ်က မက်ဆို ပြောကြားခြင်း၊
(၃) မနောကံ မေတ္တာ- သတ္တ၀ါအပေါင်းအား ဘေးရန်ခပ်သိမ်း ကင်းငြိမ်းပါစေဟု စိတ်ဖြင့်
မေတ္တာအကျိုး ၁၁-ပါး။ ။
ဒီထက်မက ပဋိသမ္ဘိဒါမဂ် ပါဠိတော် စာမျက်နှာ ၃၁၃၊ ဋ္ဌ ၊ ဒု-အုပ်၊ စာ-၂၀၇။ မေတ္တာတရား ပွားများသူတို့ မျက်မှောက် ခံစားရသော အကျိုး ၁၁-ပါးကိုလည်း အောက်ပါအတိုင်း
(၁) ချမ်းသာစွာ အိမ်ရခြင်း၊
(၃) မကောင်းသောအိပ်မက်ကို မမြင်မက်ရခြင်း၊
(၄) လူတို့ ချစ်နှစ်သက်ခြင်း၊
(၅) နတ်တို့ မြတ်နိုးခင်မင်ခြင်း၊
(၆) နတ်တို့ စောင့်ရှောက်ခြင်း၊
(၇) မီး အဆိပ်လက်နက် မသင့်နိုင်ခြင်း၊
(၈) စိတ်လျင်မြန်စွာ တည်ကြည်ခြင်း၊
(၉) မျက်နှာရုပ်ဆင်း ကြည်လင် ရွှင်ပြခြင်း၊
(၁၀) မတွေဝေဘဲ သေရခြင်း၊
(၁၁) သေသောအခါ ဗြဟ္မာပြည်သို့ လားရခြင်းတို့သာ ဖြစ်ကြပါတယ်။
မေတ္တာရှေ့သွားဖြင့် အောင်ခြင်း ၀တ္ထုကြီး ၄-ခု။ ။
ပိဋကတော်၌များစွာ ရှိသော်လည်း ၄-ပါးသည် ထင်ရှားပေါ်လွင်စွာ ရှိသည်ကို သိနိုင်ပါတယ်။
(၁) ဥတေန မင်းကြီးကို သာယာဝတီအောင်မြင်ခြင်း၊
(၂) ဆီပူလောင်းသူ သီရိမာကို ဥတ္တရာအောင်မြင်ခြင်း၊
(၃) နာဠာဂိရိဆင်ကို ဘုရားမြတ် အောင်တော်မူခြင်း၊
(၄) အာဠာဝကဘီလူးကို မြတ်ဘုရားအောင်တော်မူခြင်း။
အထက်ပါ အထင်ရှားဆုံး လေးခုထဲမှ ဓမ္မပဒအဋ္ဌကထာ၊ ကောဓဝဂ်မှလာသော ဥတ္တရာ
ဥပါသိကာဝတ္ထုကို ဤနေရာတွင် အောက်ပါအတိုင်း ရေးသား ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
မြတ်စွာဘုရားရှင် ဝေဠုဝန်ကျောင်းတိုက်မှာ သီတင်းသုံးတော်မူစဉ် ဥတ္တရာဥပါသိကာကို
အကြောင်းပြု၍ ဓမ္မပဒအဋ္ဌကထာ ကောဓ၀ဂ်၌ အက္ကောဓေန ဇိနေ ကောဓံ စသည် ပါဝင်သော အောက်ပါ တရားတော်ကို ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်။
ဥတ္တရာဆိုတာ လယ်ယာ လုပ်ကိုင်သည့် ကိုပုဏ္ဏတို့ မိသားစုမှ တစ်ဦးတည်း မွေးဖွားလာတဲ့ သမီးဖြစ်ပါတယ်။ ကိုပုဏ္ဏတို့ ဇနီးမောင်နှံသည် ရာဇဂြိုဟ်မြို့က သူဌေးကြီး သုမနဆီမှာ အလုပ် လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
တနေ့ ကိုပုဏ္ဏနှင့် ဇနီးဖြစ်သူတို့က နိရောဓသမာပတ်မှ ထလာသော ပညာအရာ ဧတဒဂ်ရ အရှင်သာရိပုတ္တကို စေတနာသုံးတန် ပြတ်သားစွာဖြင့် ဆွမ်းလောင်းလှူဒါန်းသောကြောင့်
မြေကြီးက ရွှေသီးသလို မြေစိုင် မြေခဲများ ရွှေသားအသွင်သို့ ပြောင်းသွားပြီး သူတို့၏ သဒ္ဓါတရား အစွမ်းကြောင့် လက်တွေ့ချက်ချင်း အကျိုးပေးသည့်အတွက် နေ့ချင်း ညချင်း သူဌေးကြီးအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ တိုင်းပြည် ချုပ်အုပ် မင်းလုပ်နေသည့် ဘုရင်
ကိုယ်တိုင်ကလည်း ထိုက်ထိုက်တန်တန် သူဌေးရာထူးကို အပ်နှံခဲ့ပါတယ်။ ကိုပုဏ္ဏတို့ ဇနီးမောင်နှံ သူဌေးရာထူး ရရှိပြီးသောအခါ ဝေဠုဝန်ကျောင်းတိုက်တွင်း သီတင်းသုံးတော်မူ
ကြသော မြတ်စွာဘုရား အမှူးရှိသော သံဃာတော်များကို ခုနှစ်ရက်တိုင်တိုင် မွန်မြတ်သော ဆွမ်းများဖြင့် ဆက်ကပ် လှူဒါန်းတော်မူခဲ့ပါတယ်။ ထိုခုနှစ်ရက်တာကာလတွင်းမှာ မြတ်စွာဘုရားရှင် ဟောကြားတော်မူသော တရားတော်များ ကြားရသည်နှင့် တပြိုင်နက်တည်း မိသားစု သုံးယောက်လုံး သောတာပန် ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။
ထို့နောက် သမီးဖြစ်သူ ဥတ္တရာသည် အရင်တုန်းက အလုပ်ပိုင်ရှင်ဖြစ်သော သုမန သူဌေးကြီး၏ သားဖြစ်သူနှင့် အိမ်ထောင်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဥတ္တရာသည် သောတာပန်ဖြစ်ပါလျက် အယူမတူသူ သူဌေးသားနှင့် လက်ထပ်ခဲ့ရသဖြင့် လက်ထပ်ပြီးနောက် ဝါတွင်းသုံးလနီးပါးမျှ ဘုရားအမှူးရှိသော သံဃာတော်များ ဖူးမြှော်ခွင့်၊ တရားနာခွင့်၊ အလှူဒါနပြုခွင့်၊ ဥပုသ်စောင့်
ခွင့် မရ ရှာသဖြင့် စိတ်ဆင်းရဲလှသောကြောင့် ဖခင်ထံ အကြောင်းကြားပြီး ဖခင်က သိရိမာ
ဆိုတဲ့ ပြည့်တန်ဆာကို သမီးဖြစ်သူ ကိုယ်စား သမက် သူဌေးသားလေးအား အလုပ်
အကျွေးပြုစေ၍ သမီးဖြစ်သူအား စိတ်တိုင်းကျ ကုသိုလ်ပြုလုပ်နိုင်ရန် စီစဉ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဖခင် စီစဉ်ပေးမူကြောင့် ဘုရားအမှူးရှိသော သံဃာတော်တွေကို တစ်ဆဲ့ငါးရက်တိုင်တိုင် ဘုရားရှင်နှင့် သံဃာတော်များ ဖူးမျှော်ခွင့်၊ တရားနာခွင့်၊ ဆွမ်းကပ်ဒါနပြုခွင့် စသည့် ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေ လုပ်ခွင့်ရပြီး ဥတ္တရာ ကိုယ်တိုင် ရင်တွင်း ဖော်မပြနိုင်အောင်
ထို့အပြင် ဥတ္တရာ ကုသိုလ်နဲ့ ပျော်မွေ့နေသည့် တစ်ဆဲ့လေးရက်တာကာလတွင်း ခင်ပွန်းဖြစ်သူ
သူဌးသားလေးက သတိရလို့ ဥတ္တရာ ဘာများ လုပ်နေပါလိမ့်လို့ တိုက်အပေါ်ထပ်
ပြတင်းပေါက်က လှမ်းကြည့် လိုက်ရာ ဘုရားအမှုးထားသော သံဃာတော်တွေအတွက် ဆွမ်းကပ်နိုင်ရေး ချွေးတလုံးလုံးနဲ့ အခြွေအရံများကို စီမံနေသည်ကို မြင်သွားပါတယ်။ အော်... ဒီလောက်ပြည့်စုံနေသော နေရာမှာ စည်းစိမ်ကို မခံစားပဲ ချွေးသီး ချွေးပေါက်ကျအောင် ပင်ပင်
ပန်းပန်း လုပ်နေတဲ့ အလုပ်ကိုမှ နှစ်သက်နေတဲ့ ဥတ္တရာ သူနှင့် တန်တဲ့ အလုပ်ကို လုပ်နေတာပါ
လားလို့ တွေးတောကား သရော်ပြုံး ပြုံးပြီး ဖယ်ခွာသွားပါတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာ သူဌေးသားလေး အနီးရပ်နေတဲ့ ယာယီ ခေတ္တ အငှားမယား သီရိမာကလည်း သူဌေးသားလေးကဲ့သို့ ပြုံးပြပြီး တစ်ဆဲ့ငါးရက်တာကာလ သူဌေးကတော် အယောင်ဆောင်
ကာဖြင့် နေခဲ့ရသည့်အတွက် သူ့ကိုယ်သူ သဌေးကတော် အထင်မှား အမှတ်မှားပြီး ဥတ္တရာ
အပေါ် သဝန်တို ရန်ငြိုးဖွဲ့၍ မီးဖိုချောင်မှ မုန့်ကြော်ထားသည့် ပွက်ပွက်ဆူနေသော ထောပတ်
ဆီပူကို ဇွန်းဖြင့်ခပ်ယူကာ ဥတ္တရာကို လောင်းချရန် သွားပါတယ်။ ထိုအခါ ထောပတ်ဆီပူဖြင့် လောင်းရန်လာနေသော သိရိမာသည် ရုတ်တရက် ဥတ္တရာ
ရှေ့တွင် ရပ်တန့်လိုက်ပါတယ်။ ဥတ္တရာက ငါ၏ သူငယ်ချင်းဖြစ်သော သိရိမာသည် ငါ့အပေါ်ကျေးဇူး ရှိခဲ့ဖူးပြီ၊ တကယ်တမ်း သူ့ ကျေးဇူးကို ထောက်ကြည့်လျှင် စကြဝဠာကြီးသည် အလွန်ကျဉ်းသည်၊ ဗြဟ္မာပြည်ကြီးသည် အလွန်နိမ့်သွားပါလိမ့်မည်။ သူငယ်ချင်း ကျေးဇူးတရား
သည်သာ ကြီးကျယ် မြင့်မြတ်ပေသည်။ သူငယ်ချင်းကို အမှီရ၍ အလှူ လှူခွင့်၊ တရားနာခွင့် ရခဲ့ပါပြီ။
ငါသည် သူငယ်ချင်းအပေါ် အမျက် ထွက်မိပါက ဤထောပတ်သည် ငါ့ကို လောင်ပါစေ၊ အမျက်မထွက်လျှင်ကား မလောင်စေသား ဟု မေတ္တာပွားလိုက်ရာ သိရိမာက ဥတ္တရာ၏ ဥခေါင်းပေါ်မှ ထောပတ်ဆီပူဖြင့် လောင်းလိုက်ရာ ပွက်ပွက် ဆူနေသော ထောပတ်ဆီသည်
ထိုအခါ သိရိမာသည် သူလောင်းလိုက်သော ထောပတ်က အေးနေသည်ဟု ယူဆကာ နောက်
တစ်ကြိမ် ထပ်လောင်ရန် ကြိုးစားလေရာ၊ ဥတ္တရာ၏ အခြွေအရံများက ဝိုင်းရိုက်နှက်မှုကို ခံရသဖြင့် မြေမှာ လဲကျသွားရှာပါတယ်။ သူ့၏ အခြွေအရံများကို တားမြစ်လျက် ရရှိထားသော ဒဏ်ရာများကို အကြိမ်တစ်ရာ ချက်ထားသော ဆီဖြင့် လိမ်းကျံပေးပြီး ယုယစွာပြုစုရှာပါသည်။ ထိုအခါမှ သိရိမာသည် နောင်တရ၍ ဥတ္တရာအား သည်းခံရန် တောင်းပန်ရှာပါတယ်။
ထို့နောက် ဥတ္တရာက ငါသည် ဖခင်ရှိသော သမီးဖြစ်၍ ဖခင်သည်းခံမှ ငါသည်းခံနိုင်မည် ဟု ပြောရာ သိရိမာ အနေဖြင့် ဥတ္တရာ၏ ဖခင် သူဌေးကြီးပုဏ္ဏကို တောင်းပန်ပေးပါမည်ဟု
ဥတ္တရာက ပုဏ္ဏသူဌေးကြီးသည် ငါ့အတွက် သံသရာဝဋ်ကို ဖြစ်စေတတ်သော ဖခင်သာဖြစ်၏။
သံသရာဝဋ်မှ ကျွတ်လွတ်မှုကို ဖြစ်စေတတ်သော ဖခင်ဖြစ်သော ဘုရားရှင်က သည်းခံမှ ငါသည်းခံမည်ဟု ပြောလိုက်ရာ သိရိမာက ဘုရားရှင်နှင့် အကျွမ်းတဝင် မရှိသေးပါ ဟု ပြော
ဥတ္တရာကလည်း အကျွမ်းဝင်ဖြစ်အောင် ကျွန်မ လုပ်ပေးမည်ဟု ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။
ထို့အပြင် ဥတ္တရာက နက်ဖြန်ခါ ဘုရားရှင်သည် ရဟန်းသံဃာတော်များနှင့်အတူ ကြွရောက်
လာမည်၊ တတ်နိုင်သလောက်၊ ရနိုင်သမျှ စေတနာပြဋ္ဌာန်းသော လှူဒါန်းဖွယ်ရာတို့ကို ယူဆောင်လျက် ဤနေရာသို့ ဝင်လာကာ မြတ်စွာဘုရားရှင်ကို တောင်းပန်ပါဟု ပြောကြား
ဥတ္တရာ ပြောကြားထားသည့်အတိုင်း ဆွမ်းကပ်ပြီးနောက် ဘုရှားရှင်၏ ခြေတော်ရင်း၌ ဝပ်စင်းလျက် တောင်းပန်စကားနှင့်တကွ ဖြစ်ခဲ့ဖူးသော အကြောင်းအရာ အလုံးစုံကို လျောက်
ထားသည့်အခါ မြတ်စွာဘုရားရှင်က ဥတ္တရာအား သာဓု ခေါ်တော်မူပြီး အမျက်သမားကို ဤကဲ့သို့သော မေတ္တာတရားဖြင့် အနိုင်ယူသင့်ကြောင်း အစချီကာ အောက်ပါ ဂါထာတော်ကို
အက္ကောဓေန ဇိနေ ကောဓံ၊ အသာဓုံ သာဓုနာ ဇိနေ။
ဇိနေ ကဒရိယံ ဒါနေန၊ သစ္စေနာလိကဝါဒိနံ''။
Conquer anger by love, evil by good;
conquer the miser with liberality, and the liar with truth.
အမျက်ထွက်တတ်သောသူကို အမျက်မထွက်ခြင်းဖြင့် အောင်ရာ၏။
မကောင်းသောသူကို ကောင်းသောသဘောဖြင့် အောင်ရာ၏။
နှမြောဝန်တိုသောသူကို ပေးကမ်းခြင်းဖြင့် အောင်ရာ၏။
ဤကဲ့သို့သော တရားတော်ကို ဟောကြားတော်မူပြီး အဆုံးတွင် သီရိမာနှင့် အခြွေအရံ ငါးရာ
တို့သည် သောတာပန်များ ဖြစ်သွားကြပါတယ်။ ဒီအကြောင်းအရာဟာ မေတ္တာတရား၏ စွမ်း
ရည်နှင့် မေတ္တာတရား၏ သတ္တိကြောင့် သံသယကင်းသော သူတော်ကောင်းတွေ ဖြစ်သွား
ကြသလို မျက်မှောက်ခေတ်မှာလည်း အကျိုးပြုနိုင်သော ဘုရားရှင်လက်ထက်က မေတ္တာ
တရားနှင့် ပတ်သက်သော သာဓကကောင်း တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
ထို့အပြင် အဘိဓမ္မာပိဋက ဓမ္မသင်္ဂဏီအဋ္ဌကထာတွင်လည်း အောက်ပါအတိုင်း မေတ္တာနှင့် ပတ်သက်ပြီး ရေးသား တင်ပြထားသည်ကို တွေ့ရှိရပါတယ်။
ယထာပိ ဥဒကံ နာမ, ကလျာဏေ ပါပကေ ဇနေ။
သမံ ဖရတိ သီတေန, ပဝါဟေတိ ရဇောမလံ။
တထေဝ တွမ္ပိ ဟိတာဟိတေ, သမံ မေတ္တာယ ဘာဝယ။ (အဘိ၊ ဓမ္မသင်္ဂဏီအဋ္ဌကထာ၊ စာမျက်နှာ-၅၂)
ရေဟာ လူကောင်းဖြစ်စေ လူဆိုးဖြစ်စေ မျက်နှာမလိုက်ပဲ
အေးမြခြင်းကို အညီအမျှ ပေးတယ်။
ထို့အတူ ရန်သူမိတ်ဆွေ မရွေး အညီအမျှ မေတ္တာကို ပွားများရာ၏။
ခုဒ္ဒကနိကာယ၊ ဓမ္မပဒအဋ္ဌကထာ၊ ပိယဝဂ္ဂ၊ ဂါထာနံပါတ် - ၂၀၉၊ ၂၁၀၊ ၂၁၁ တို့တွင် အောက်
၂၀၉။ အယောဂေ ယုဉ္ဇမတ္တာနံ၊ ယောဂသ္မိဉ္စ အယောဇယံ။
အတ္ထံ ဟိတွာ ပိယဂ္ဂါဟီ၊ ပိဟေတတ္တာနုယောဂိနံ။
၂၁၀။ မာ ပိယေဟိ သမာဂဉ္ဆိ၊အပ္ပိယေဟိ ကုဒါစနံ။
၂၁၁။ တသ္မာ ပိယံ န ကယိရာထ၊ ပိယာပါယော ဟိ ပါပကော။
ဂန္ထာ တေသံ န ၀ိဇ္ဇန္တိ၊ ယေသံ နတ္ထိ ပိယာပ္ပိယံ။ (ခုဒ္ဒကနိကာယ၊ ဓမ္မပဒအဋ္ဌကထာ၊ ပိယဝဂ္ဂ)
၂၀၉။ မိမိကိုယ်ကို အားမထုတ်သင့်ရာ၌ အားထုတ်လျက် အားထုတ်သင့်ရာ၌ အားမထုတ်ဘဲ အကျိုးစီးပွားကို စွန့်လွှတ်၍ ချစ်ဖွယ်အာရုံ ကာမဂုဏ်ကို စွဲလမ်းသူသည် ကိုယ်တိုင်အားထုတ် သူတို့၏ အကျိုးစီးပွားကို ငါရမူကား ကောင်းလေစွဟု လိုလားတောင့်တ၏။
၂၁၀။ ချစ်သောသူတို့နှင့်လည်း မပေါင်းဖော်လင့်၊ မုန်းသောသူတို့နှင့်လည်း တစ်ခါတစ်ရံမျှ မပေါင်းဖော်ပါလင့်၊ ချစ်သောသူတို့ကိုလည်း မမြင်ရခြင်းသည် ဆင်းရဲ၏၊ မုန်းသောသူတို့ကို
၂၁၁။ ထို့ကြောင့် လူကိုဖြစ်စေ ပစ္စည်းဥစ္စာကိုဖြစ်စေ ချစ်ခင်စွဲလမ်းခြင်းကို မပြုရာ၊ ချစ်ခင်စွဲ
လန်းဖွယ်ရာတို့နှင့် ကွေကွင်းရခြင်းသည် မကောင်းသည်သာတည်း၊ ချစ်ခြင်းမုန်းခြင်း မရှိသော သူတို့အား အနှောင်အဖွဲ့တို့ မရှိကြကုန်။
209. One who does what should not be done and fails to make efforts on virtuous deeds, who forgets the true aim of life and sinks into sensual desires – will one day envy the person who makes efforts in high contemplation.
210. Do not be in together with loved ones, also not get acquainted with unpleasant; not to see loved ones is pain, so also it is pain to see unpleasant.
211. Therefore do not make endearment, for separation from the dear is painful. Those who hold nothing dear and hate nothing has no fetters.
ခုဒ္ဒကနိကာယ၊ ဓမ္မပဒအဋ္ဌကထာ၊ ပိယဝဂ္ဂ၊ ဂါထာနံပါတ် ၂၁၇ မှာ မေတ္တာတရား၏ အခြင်း
အရာကို အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြ ရေးသားထားသည်ကိုလည်း တဖန် တွေ့ရပါတယ်။
၂၁၇။ သီလဒဿနသမ္ပန္နံ၊ ဓမ္မဋ္ဌံ သစ္စဝေဒိနံ။
အတ္တနော ကမ္မ ကုဗ္ဗာနံ၊ တံ ဇနော ကုရုတေ ပိယံ။ (ခုဒ္ဒကနိကာယ၊ ဓမ္မပဒအဋ္ဌကထာ၊ ပိယဝဂ္ဂ)
၂၁၇။ သီလနှင့်လည်းပြည့်စုံ ဉာဏ်အမြင်နှင့်လည်း ပြည့်စုံ၍ တရား၌တည်ကာ အမှန်တရား
ကိုလည်း သိတတ်သော မိမိပြုဖွယ် အမှုကိစ္စကိုလည်း ပြုတတ်သူကို လူအပေါင်းသည် ချစ်မြတ်နိုး၏။
217. The one who has virtue and vision, who follows Dhamma, who realizes truth,
and fulfills the work to be done – the world loves that person.
သမ္မဒညာ ၀ိမုတ္တဿ၊ ဥပသန္တဿ တာဒိနော။ (ခုဒ္ဒကနိကာယ၊ ဓမ္မပဒအဋ္ဌကထာ၊ အရဟန္တဝဂ်)
၉၆။ အကြောင်းအားလျော်စွာ တရားကိုသိ၍ ကိလေသာမလွတ်သော ငြိမ်သက်သော
ဖောက်ပြန်ခြင်း သဘောမရှိသော ထိုရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်၏ စိတ်သည်လည်း ငြိမ်သက်၏၊
နှုတ်အမူအရာသည် လည်းကောင်း၊ ကိုယ်အမူအရာသည် လည်းကောင်း ငြိမ်သက်၏။
96. The Arahant who is liberated and gone to serenity by perfect knowledge
(the Truth) is calm and also the speech and the action are calm.
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့် မေတ္တာတရား ပြည့်ဝကြသူတွေဟာ ကြံတိုင်းအောင် ဆောင်တိုင်းမြောက်
သလို အသက်ရှင်သန်နေဆဲကာလ လူချစ်၊ နတ်ချစ်ပြီး သတ္တဝါတိုင်း မြတ်နိုးကြပါတယ်။
ထို့အပြင် ဘေးရန်းကင်းခြင်း၊ ကြောက်စိတ် မရှိခြင်း၊ မြင်သူတိုင်း လေးစားချစ်ခင်ပြီး ဘဝမှာ
ကိုယ်ချမ်းသာ စိတ်ချမ်းသာခြင်း၊ ချမ်းသာအစစ်ကို တွေ့လွယ်၊ မြင်လွယ်၊ ကြားလွယ်၊ အသိပညာတွေ တတ်မြောက်လွယ်ပြီး ဘဝရဲ့ အဆင့်တန်းရှိသော နေရာတို့တွင် နေနိုင်သော
အပေါ်ယံသက်သက် သူတစ်ပါးအပေါ် မေတ္တာထားတာ မဟုတ်ပဲ ငါ သူတစ်ပါး ယောင်္ကျား မိန်းမ မခွဲခြားသော အသိစိတ်ဖြင့် ဘေးရန် အန္တရာယ်၊ ဆင်းရဲမှု ဒုက္ခသုက္ခတွေကို ကင်းရှင်း
ပါစေခြင်း အကျိုးငှာ မိမိစိတ်ကို နစ်၍ သတ္တဝါဟူသမျှ "အဝေရာ ဟောန္တု" ရန်မရှိကြပါစေနဲ့၊
"အဗျာပဇ္ဇာ ဟောန္တု" စိုးရိမ်ကြောင်းကြ ဗျာပါဒ မရှိကြပါစေနဲ့၊ "အနီဃာ ဟောန္တု" ဆင်းရဲခြင်း
သောကဟူသမျှ မရှိကြပါစေနဲ့၊ "သုခိအတ္တာနံ ပရိဟာရ န္တု" ကိုယ်၏ ချမ်းသာခြင်း စိတ်၏
ချမ်းသာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေလို့ မေတ္တာသက်သက် ပွားများ လုပ်ကိုင်ပေးခြင်းသာ
ဒါကြောင့် မေတ္တာတရားသည် ဘယ်ကဲ့သို့ ပုဂ္ဂိုလ် သတ္တဝါ၊ အချိန်ကာလ၊ နေရာထိုင်ခင်း၊ အရပ်ဒေသ၊ ရွေးချယ်ပြီးမှ ပွားများတာ မဟုတ်ပါဘူး။မေတ္တာတရား ပွားများသူတိုင်း လက်တွေ့ အစွမ်းထက်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် အားလုံးသော သူတော်ကောင်းတို့သည်လည်း သူတော်
ကောင်းတရားနှင့် မေတ္တာတရားတို့ ကိုယ်ဆီ ရှိကြပြီး ဘုရားအလောင်း သူတော်ကောင်းတို့
ပျော်စံရာ အမှန်တရားတို့ ဆိုက်ကပ်ရာ မြတ်နိဗ္ဗာန်ကို လျှင်မြန်သော အသိ၊ ထက်မြက်သော ဥာဏ်ပညာတို့ဖြင့် ဧကန်အစစ် ပါရမီရင့်၍ ရောက်နိုင်ပါစေ ဟု ဆုတောင်းပတ္တနာပြုရင်း နိဂုံးချုပ်လိုက်ပါတယ်။
(၁) သုတ္တန္တပိဋက၊ အင်္ဂုတ္တရ နိကာယ၊ ပဌမပဏ္ဏာသ၊ မေတ္တာဝဂ္ဂ၊ စာမျက်နှာ ၁
(၂) သုတ္တန္တပိဋက၊ အင်္ဂုတ္တရနိကာယ၊ ပဉ္စကနိပါတ၊ သံမယသုတ္တံ၊ စာမျက်နှာ-၅၈
(၃) သုတ္တန္တပိဋက၊ အဂုင်္တ္တရနိကာယ၊ ပဉ္စကနိပါတ၊ သံမယသုတ္တံ၊ စာမျက်နှာ-၅၉
(၄) မူလပဏ္ဏာသ ပါဠိတော် ၂၆၇၊ အဋ္ဌကထာ ၊ ဒုတိယအုပ်၊ စာမျက်နှာ ၁၄၂
(၅) အဘိဓမ္မာပိဋက၊ ဓမ္မသင်္ဂဏီအဋ္ဌကထာ၊ စာမျက်နှာ-၅၂
(၆) ပဋိသမ္ဘိဒါမဂ် ပါဠိတော် စာမျက်နှာ ၃၁၃၊ ဋ္ဌ ၊ ဒု-အုပ်၊ စာ-၂၀၇
(၇) ဓမ္မပဒအဋ္ဌကထာ၊ ကောဓဝဂ္ဂ၊ ဥတ္တရာဥပါသိကာဝတ္ထု
(၈) ခုဒ္ဒကနိကာယ၊ ဓမ္မပဒအဋ္ဌကထာ၊ ပိယဝဂ္ဂ၊ ဂါထာ - ၂၀၉၊ ၂၁၀၊ ၂၁၁
(၉) ခုဒ္ဒကနိကာယ၊ ဓမ္မပဒအဋ္ဌကထာ၊ ပိယဝဂ္ဂ၊ ဂါထာ - ၂၁၇
(၁၀) ခုဒ္ဒကနိကာယ၊ ဓမ္မပဒအဋ္ဌကထာ၊ အရဟန္တဝဂ္ဂ၊ ဂါထာ - ၉၆
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 9:25 AM